Iwo Matanho Matanhatu eiyo B2B Mutengi Rwendo | Martech Zone
Aya Matanho matanhatu eB2B Mutengi Rwendo
Muvhuro, Kukadzi 1, 2021 Svondo, Kukadzi 7, 2021 Douglas Karr
Pakave nezvakawanda zvinyorwa pamusoro penzendo dzemutengi mumakore mashoma apfuura uye kuti mabhizinesi anodikanwa sei kuchinjisa manhamba kuti agadzirise shanduko mumaitiro emutengi. Iwo matanho ayo mutengi anofamba nawo akakosha pane ako ese ekutengesa nekutengesa nzira kuti uve nechokwadi chekuti urikupa ruzivo kune vanotarisira kana vatengi kupi uye pavanenge vachitsvaga.
In Gartner's CSO kugadzirisa, ivo vanoita basa rinonakidza rekuparadzanisa uye kutsanangura mashandiro anoita vatengi veB2B kuburikidza nenyaya yacho kusvika pakutenga mhinduro. Haisi kutengesa funnel izvo makambani mazhinji akagamuchira uye kuyera zvinopesana. Ini ndinokurudzira munhu wese kunyoresa uye kurodha pasi chirevo.
Dhawunirodha: Iyo Nyowani B2B Yekutenga Rwendo uye Kukosha Kwayo Kwekutengesa
B2B Mutengi Rwendo Rwendo
Dambudziko Kuzivikanwa - bhizinesi rine nyaya yavari kuyedza kugadzirisa. Zvemukati zvaunopa panguva ino zvinofanirwa kuvabatsira kuti vanzwisise zvakakwana dambudziko, mutengo wedambudziko kusangano ravo, uye kudzoka kwekudyara kwemhinduro. Parizvino, ivo havasi kana kutsvaga zvigadzirwa zvako kana masevhisi - asi nekuvapo nekupa hunyanzvi kwavari kuti vanyatsotsanangura dambudziko ravo, iwe uri kutotungamira kunze kwegedhi semunhu anogona kugadzirisa mhinduro.
Solution Kuongorora - ikozvino bhizinesi parinonzwisisa dambudziko raro, ikozvino vanofanirwa kutsvaga mhinduro. Apa ndipo panoshambadzirwa, kutsvaga, uye pasocial media zvakakosha kusangano rako kubatika. Iwe unofanirwa kuve uripo mukutsvaga pamwe nezvinoshamisa zvemukati izvo zvinopa chivimbo chako chaunoda tarisiro kuti iwe uri mhinduro inoshanda. Iwe zvakare unofanirwa kuve neanoshanda anotengesa timu uye nevamiriri varipo uko tarisiro yako nevatengi vari kukumbira ruzivo pane vezvenhau.
Zvinodiwa Kuvaka - rako bhizinesi harifanire kumirira chikumbiro chechikumbiro kuti utsanangure kuti unobatsira sei kuzadzisa zvavanoda. Kana iwe uchigona kubatsira tarisiro yako uye vatengi kunyora zvavanoda, unogona kuenda kumberi kwemakwikwi ako nekuburitsa simba uye zvimwe zvinobatsira zvekushanda nesangano rako. Ino inzvimbo yandaigara ndichitarisa kune vatengi vatakabatsira. Kana iwe ukaita iro rakaoma basa rekuvabatsira kugadzira iyo yekutarisa, vanzwisise nguva, uye nekuyera mhedzisiro yemhinduro, iwe uchazomhanyisa-kuteverwa kumusoro wemusoro wemhinduro mhinduro.
Mutengesi Sarudzo - Yako webhusaiti, yako yekutsvaga yekutsvaga, yako yemagariro midhiya kuvapo, ako mutengi zvipupuriro, ako ekushandisa kesi, kwako kufunga hutungamiriri kuoneka, zvitupa zvako, zviwanikwa zvako, uye indasitiri kuzivikanwa zvese zvinobatsira mukuisa tariro yako nyore kuti iwe uri kambani iyo vanoshuvira kuita bhizinesi ne. Yako yeruzhinji hukama femu inofanirwa kunge iri pamusoro pekuona kuti unogara uchitaurwa mumaindasitiri ezvinyorwa semugovanisi anozivikanwa wezvigadzirwa nemasevhisi ayo vatengi vari kutsvagisa vatengesi. Vatengi vebhizimusi vanogona kuenda nemhinduro isingarove ese mamaki ekutarisa… asi kuti ivo vanoziva vanogona kuvimba. Iyi inhanho yakakosha yeboka rako rekushambadzira.
Kugadziriswa Kwe Solution - Vamiriri vekusimudzira bhizinesi (Bdkana vamiririri vekusimudzira mhinduro (SDR) ndivo masters ekugadzirisa zvinodiwa nevatengi uye nekumisidzira tarisiro pakukwanisa kwavo kuunza mhinduro. Nyaya dzezvidzidzo dzinoenderana neyako indasitiri indasitiri nekukura kwakakosha pano kuita kuti tarisiro dzako dzione kuti mhinduro yako inokwanisa kugadzirisa dambudziko ravo. Makambani ane zviwanikwa anogona kutomboisa mari muzviratidziro panguva ino kurega tarisiro ichiona kuti vafunga nemhinduro.
Kubvumirana Kusika - Mune bhizinesi, isu hatiwanzo kushanda nemusarudzo. Kazhinji kazhinji kwete, danho rekutenga rinosiyiwa mukubvumirana nechikwata chehutungamiriri uye zvobva zvabvumidzwa. Nehurombo, isu kazhinji hatina mukana wekuwana timu yese. Vamiriri vekutengesa vakakura vanonyatsonzwisisa izvi uye vanogona kudzidzisa nhengo yechikwata nzira yekupa mhinduro yavo, kusiyanisa bhizinesi ravo kubva kumakwikwi, uye kubatsira timu kuwana nzira yekubvumidzwa.
Aya matanho haagari achimhanya zvinoteedzana. Mabhizinesi anowanzo shanda kuburikidza nechero kana mamwe matanho, kuchinja zvavanoda, kana kuwedzera kana kudzikisira tarisiro yavo pavanenge vachifambira mberi kunotenga. Kuve nechokwadi chekutengesa kwako uye kushambadzira zviri zviviri zvakabatana uye zvinoshanduka kugadzirisa izvo shanduko zvakakosha pakubudirira kwako.
Kufambisa Kumusoro MuRwendo Rwevatengi Vako
Vazhinji vatengesi veB2B vanodzikisira mukana wekambani yavo kune vanotarisira vatengi nekutarisa pakuonekwa kwavo kwekuwanikwa sevatengesi vanogona kupa chigadzirwa kana sevhisi. Iri zano rekudzora nekuti ivo havapo kare mukutenga.
Kana bhizinesi riri kutsvaga dambudziko ravanaro, havasi ivo vari kutsvaga kambani yekutengesa chigadzirwa kana sevhisi kwavari. Ruzhinji rwematanho eB2B Ekutenga Rwendo anotangira mutengesi sarudzo.
Nyaya iripo; pamwe pane anotarisira mutengi anoshanda mune Zvemari Tekinoroji uye anoda kusanganisa nharembozha nevatengi vavo. Vanogona kutanga nekutsvaga indasitiri yavo uye kuti vatengi vavo kana vakwikwidzi vari kusanganisa sei zviitiko zvefoni mune yavo yakazara ruzivo rwevatengi.
Rwendo rwavo runotanga nekutsvagisa kwekutora nhare uye kuti vatengi vavo vangangoshandisa mameseji kushambadzira kana nharembozha. Sezvo ivo vachiverenga zvinyorwa, iwe unoona kuti kune vanobatana vanobatana, vekusimudzira vanobatirana, wechitatu-bato kunyorera, uye kuwanda kwesarudzo.
Panguva ino, hazvingave zvinonakidza here kana bhizinesi rako - ndiani anovandudza kusanganisa kwakaomarara kumakambani eFintech aive aripo mukuvabatsira kuti vanzwisise kuoma kwedambudziko? Mhinduro yakapusa ndeye ehe. Hausi iwo mukana wekusimudzira mhinduro dzako (zvakadaro), kungo kupa nhungamiro kwavari kuvabatsira kuti vabudirire mune ravo basa basa uye mukati mekambani yavo.
Kana iwe ukavaka madhairekitori akazara akakomberedza kuzivikanwa kwedambudziko uye ukapa tsigiro inotsigira - tarisiro yatove kutonzwisisa kuti unonyatsonzwisisa dambudziko ravo, indasitiri yavo, nematambudziko avanotarisana nawo. Kambani yako yatove yakakosha kune iyo tarisiro uye kambani yako yatangisa kuvaka chiremera uye kuvimba navo.
Matanho eRwendo rweKutenga uye Yako Yemukati Raibhurari
Aya matanho anofanirwa kuverengerwa mune rako remaraibhurari. Kana iwe uchida kugadzira khalendari yezviri mukati, kutanga nematanho erwendo rwevatengi vako chinhu chakakosha pakuronga kwako. Heano mufananidzo wakanaka wekuti unoratidzika sei kubva kuGartner's CSO Kwidziridzo:
Chikamu chega chega chinofanirwa kuputswa nekutsvaga kwakadzama kuona kuti raibhurari yako yezvinyorwa ine mapeji, mifananidzo, mavhidhiyo, nyaya dzenyaya, zvipupuriro, zvinyorwa, macalculator, nguva ... zvese zvine chekuita nekupa wako B2B mutengi ne ruzivo rwavanoda kuvabatsira.
Raibhurari yako yezvinyorwa inofanirwa kuve yakarongeka, inotsvagika, inogara yakamisikidzwa, yakanyorwa zvakapfupika, inotsvaga kutsvagurudza, kuwanikwe kune vemasvikiro (zvinyorwa, mifananidzo, vhidhiyo), mazhinji anogoneswa nharembozha, uye anongedzera kukosha kune vatengi vauri kutsvaga.
Chinangwa chezvese chekushambadzira kwako chinofanirwa kunge chiri chekuti mutengi wako anogona kufambira mberi kusvika pavanenge vachida parwendo rwevatengi pasina chikonzero chekubatana nekambani yako. Tarisiro dzinoda kufamba zvakanyanya kuburikidza nematanho aya pasina rubatsiro rwevashandi vako. Nepo kuunza vashandi vako pakutanga muzvikamu kunogona kubatsira, hazviwanzo kuitika.
Kuwedzera omni-chiteshi kushambadzira kuedza kwakakosha pakukwanisa kwako kuvhara bhizinesi iri. Kana tarisiro yako isingakwanise kuwana rubatsiro rwavanoda kuti vazivise uye vafambisire mberi rwendo rwavo, iwe unokwanisa zvakanyanya kurasikirwa navo kumukwikwidzi akaita.
Tags: b2bb2b rwendo rwemutengib2b rwendo rwevatengirwendo rwevatengikubvumirana kugadzirwacso kugadzirisarwendo rwevatengigartnerkuzivikanwa kwedambudzikozvinodiwa kuvakamhinduro yekutsvagamhinduro yekusimbiswamutengesi sarudzo
Nei Ndichiyambira SaaS Makambani Kurwisa Kuvaka Yavo CMS